SolusOS dia manomana installer vaovao | Avy amin'ny Linux
SolusOS dia manomana mpiorina vaovao
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fisehoana / personalization, fampiharana, GNU / Linux
Ikey doherty tsy miala sasatra ary ao amin'ny mombamomba azy G+ Mampiseho amintsika ny endrik'ilay mpiorina vaovao SolusOS, izay ekeko fa tsara tarehy. Farafaharatsiny amiko dia mitovy be amin'ny openSUSE.
Inona ny hevitrao? Ao amin'ny mombamomba ny Ikey misy video vitsivitsy mampiseho antsika ny installer miasa tanteraka ... 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » SolusOS dia manomana mpiorina vaovao
Tena tiako ilay izy: ary raha toa ilay avy amin'ny openSUSE ary Ikey SI dia avy amin'ny openSUSE no nahazo aingam-panahy; Raha ny marina dia nanontany anay ny pluseros izahay momba ny fahitan'ny lafiny tsirairay amin'ny mpiorina tsara kokoa ary nomeko azy ny fankatoavako sy ny +1 an-tsaina indrindra; antenaina fa mahatratra 2.0 ihany koa ny installer
khourt dia hoy izy:
Mahagaga ahy ny làlana izay alehan'i SolusOS ary miandry fatratra ny kinova 2. Ankehitriny, ny marina dia mahatsiravina ny teny anglisy ary satria hitako fa olona mavitrika ianao eo amin'ny fiarahamonina, dia tsy mangataka aminao aho raha manampy safidy mandroso, dia ny amboary ny fanapaha-kevitra tsy misy fangarony avy amin'ny mpiorina ary alaviro ny fanaovana azy io amin'ny tanana Xorg. Tsy fantatro ihany koa raha afaka nanara-maso an'i Mageia ianao, saingy ny fitaovana Drak-conf dia tena tsara ho an'ny mpampiasa hitantana ny safidin'ny rafitra avy amin'ny interface graphique tsy mila mampiasa console. Inona ny hevitrao ?
Mamaly an'i khourt
Tena tsara izany, saingy .. mamaha fa tsy azoko antoka mihitsy, nanana tantara an-tsehatra foana aho. Tena ratsy, hiandry debian 7. Tsy mila fanovana lalina sy tsy hatsarana intsony aho.
Tena tsara, tsara ho an'i Ikey izay mbola miasa amin'ity tetikasa ity, izay raha ny tena izy dia fizarana tena milamina sy haingana ary miasa, tena tsy misy ifandraisany amin'ilay "aorian'ny fametrahana" mahazatra satria io fizarana io dia misy ny fototra rehetra amin'ny birao miasa marina izao.
Ny fizotran'ny ekipa SolusOS dia tsara ary ny installer dia toa tsara. Raha ny tena izy, ary raha ny fijeriko manokana manokana dia heveriko fa ny installer openSUSE dia, raha tsy ny tsara indrindra, iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tontolo Linux ary aingam-panahy avy amin'izany, araka ny hevitro, mbola tsara kokoa aza.
MODE ([TROLL] + »ON»)
Mahaliana fa raha mbola tsy miresaka momba ny ubuntu izy ireo dia ny fanehoan-kevitra dia:
MODE ([TROLL] + »OFF»)
Ny tena marina dia, intuitive kokoa sy kanto kokoa izy, fahombiazan'ny olona solusOS tena tsara.
Manana fotoana ambany isika rehetra, ao anatin'izany ny distos, ho hitanao fa hiverina i Ubuntu. Fa ny solusOS dia mahatonga anao tena te hanandrana azy, toa tsara izany ary ny hany zavatra azoko dia ny fijerena tsara.
Tsy tiako izany, toa ahy fa distro iray hafa io ary io no izy. Aleoko i Mint raha izany no antony. Miisa ratsy ve ny hevitro?
Tsia, aleoko i Debian, saingy tsy azontsika lavina fa ny disto rehetra dia manana zavatra mihoatra ny hafa, izay mahatonga azy ireo hahazo vondrom-piarahamonina lehibe.
Tsy dia be loatra koa ny manandrana azy, satria manokana dia manome be dia be, ratsy loatra fa tsy manam-potoana na fizarazarana malalaka (tsy te handefa mihoatra noho ny kapila aho.)
Pato dia hoy izy:
Rehefa mandeha i Iker dia ho raisina ho angano eo amin'ny tontolon'ny Linux izy….
SolusOS, distro tsara, misy distro tsara ary ankehitriny manana installer tsara = olona maro kokoa mampiasa linux ...
mihatsara hatrany isika ...
Mamaly an'i Beby
Miala tsiny amin'ny hevitra, fa io distro io dia mbola mampiasa na mbola hanohy hampiasa ny Debian ho fototra ??? Ny tiako holazaina dia hoe raha mbola hampiasa ireo repo Debian izy io, satria nahare zavatra momba ny hifindra any Pardus aho… miala tsiny noho ny tsy fahalalako an'ity distro ity .. ..
roberth dia hoy izy:
Heveriko fa tsara ity distro ity, vao 2 volana aho no niaraka taminy, manome olana kely amin'ny feo aho, henoina amin'ny fanodinkodinana indraindray .. fa ampiasaiko mahazatra
Valiny amin'ny roberth
Niverina tany amin'ny KDE i Linus Torvalds
Tsy hisy intsony ny kinova alpha an'ny Ubuntu